नेकपा एमालेका तर्फबाट पोखरा ३२ का अमेद्वार पुन भन्छन्, ‘सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिनेछौं’ - Prime News Nepal
नेकपा एमालेका तर्फबाट पोखरा ३२ का अमेद्वार पुन भन्छन्, ‘सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिनेछौं’
१) तपाई दोस्रो पटक उम्मेदवार दिनुभएको छ । तपाईंको जित्ने आधार के हो ?
मेरो जित्ने आधार भनेको नेकपा एमालेको विचार सिद्धान्त पार्टीको निष्ठा कार्यकर्तामा एकता हो । दोस्रो कुरा, जनतासँग हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध राम्रो छ । नेकपा एमालेका सम्पूर्ण उमेद्वार सबै मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । घरदैलोमा जाँदा यस पटक एमालेलाई विजय गराउने भन्नुभएको छ । यस पटक उठेका उमेद्वारसामाजिक हिसाबले सबै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवी भएको हँुदा जनताको सहानुभुती हामीप्रति छ ।
२) ५ वर्ष अघि तपाईं लड्दै गर्दा झिनो मतान्तरले हार्नु भो, त्यो बेला र अहिलेको अवस्था कसरी नियाल्नु भएको छ ?
पहिलो निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको काम कारवाहीको विषयमा जनतालाई जनकारी थिएन । त्यति बेला जनता अन्योलमा थिए । अहिले स्थानीय सरकार वडामा कसलाई जिताउँदा के हुने रहेछ भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । यो ५ वर्षमा जनता के स्पष्ट देखिन्छ भने समग्र वडाको विकासका लागि नेकपा एमालेलाई जिताउनुपर्छ । नेकपा एमालेको सिद्धान्त सही छ । उत्पीडन, लिंग, जाति क्षेत्र र वर्गसँग समुदायको विचारसँग सम्बन्धित छ । यो वडाको समग्र विकासको लागि नेकपा एमालेलाई जिताउनु पर्छ भन्ने जुन खालको उत्साह देखिएको छ । स्थानीय तह सरकारको सन्र्दभमा जनता सुसुचित भएको देखिन्छ र मेरो नेतृत्वमा रहेको सिंगो टिमसहित मेयर उपमेयरलाई जिताउने जनताले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । हिजो रहेका कामलाई पूरा गर्न अब नेकपा एमालेको नेतृत्व आवश्यक छ ।
३) तपाईंले जित्नुभयो भने वडा नं ३२ लाई कस्तो बनाउनु हुन्छ ?
यहाँ सुकुम्वासीको समस्या छ, यसलाई विधि प्रक्रियाबाट हल गरिने छ । यहाँ वडामा सेतो लालपूर्जा छन् । यो लालपूर्जालाई रातो लालपूर्जामा परिणत गरिने छ र यहाँका कतिपय क्षेत्रमा बेगनास सिँचाई परियोजना, रुपा फुस्र्रेखोलाको पानीले प्रभावित पारेको छ । त्यसलाई संरक्षण गरिने छ । यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा आमूल परिर्वतन गर्नेछौं । वडा नं ३२ सुखि वडा र समृद्ध वडा बनाउने छौं, र हाम्रो टिमले तत्कालीन गर्नुपर्ने काम विकास निर्माणका योजना, दीर्घकालिन रुपमा गर्ने कामको तय गर्ने छौं । ५ वर्षपछि यो वडा समृद्ध वडा सुखी वडावासी बन्ने छन् । भन्ने कुरा स्पष्ट खाका बन्ने गरेर हामीले काम गर्ने छौं ।
४) तपाईंलाई कति मतान्तरले जित्छु भन्ने लाग्छ ?
जनताको चाहाना आकांक्षालाई हेर्दा हामीले भारिमतले विजय हुनेछौं ।
५) वडा नं ३२ का जनतालाई तपाईंको अपील के रहन्छ ?
तत्काल गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको सेवा गर्ने, सुकुम्वासीको समस्या समधान गर्न जनताले विवेक गर्न आम मतादाताले यो पटक सूर्यमा मतदान गर्नुहुन अपील गर्दछु ।